Qoraa (Reer aw xasan waa beel kamid ah‎. Af Ingiriis : Writer) waa qofka allifa qora buugaagta sheekooyinka, kitaabada iyo riwaayadaha. qoraanimadu waa noocyo badantahay waxayna cuskantahay hibada wax qoraal ee dadka qaar ilaahay siiyo, oo lama oranayo cid walboo wax qortaa waa qoraa, saasoo ay tahayna qoraanida waxaa lagu kasban karaa aqoonta iyo wax barashada.
Qoraal (Af Ingiriis : writing; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa nidaam xarfo loo habeeyay si kala horeeysa taasi oo loo isticmaalo in lagu gudbiyo ama keydiyo fariin, warbixin, aqoon iyo akhbaar. Wax-qoridu waxay ka mid tahay isgaarsiinta dadka taasi oo ka turjunta luuqada, dareenka iyo macluumaadka dadka. Sida caadiga ah, qoraalku waa lamaanaha hadalka, sababto ah qoraalka ayaa hadal loo bedeli karaa ama hadal ayaa qoraal laga dhigi karaa. Sidaasi darteed ayaa wax-qoristu qeyb uga tahay aasaaska isgaarsiinta aadahama.